RW Cabdiweli: Waxaan codsanayaa in dhinacyadii muranku saameeyey is cafiyaan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
RW Cabdiweli: Waxaan codsanayaa in dhinacyadii muranku saameeyey is cafiyaan
Mareeg.com: Ra’iisul Wasaarahii Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee baarlamaanku kalsoonida kala noqday, Cabdiwali Sheekh Axmed ayaa soo jeediyey iney is cafiyaan dhinacyadii uu saameeyey muranka siyaasadeed ee lagu riday xukuunadii uu hogaaminayey.
“6-da Diseember 2014, Xildhibaanda Golaha Shacabka waxay kalsoonidii kala noqdeen xukuumadda aan hoggaminayo. Waxaan si kalsooni ku dheehan tahay u soo dhoweynayaa go’aankaas, anigoo si buuxda u aqbalay. Waxaan aad ugu faraxsanahay in goluhu go’aankaas meelmariyey, iyagoo xasiloon oo degan. Waxaan bogaadinayaa guddoonka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliyeed oo si ku dheehan dadaal iyo karti ku daadihinayey kulankii shalay. Waxaan u mahadcelinayaa xildhibaannada oggolaaday iyo sidoo kale kuwii diiday kalsooni kala noqoshada Xukuumadda. Labada dhinacba waxay si sharaf leh u guteen waajibaadkooda dastuuriga ah” ayuu yiri RW Cabdiweli.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa uga mahadceliyey Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud wada shaqayntii dhex martay mudadii sanadka ahayd.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa dhanka kale sheegay inuusan marnaba iloobi doonin taageeradii hagar la’aaneed ee shacabka Soomaaliyeed oo ku nool dalka gudhiisa iyo dibadiisa ay u muujiyeen mudadii sanadka ahayd iyo Beesha caalamka oo mar walba garab taagnayd xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa codka kalsoonida kala noqday RW Cabdiweli kadib markii uu khilaaf soo kala dhexgalay isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh.
Mustaf Dhuxulow oo ka dhoofay Muqdisho iyo amarkii xeer ilaaliyaha oo socon waayay